News Mansarovar » चीनमा के होला नयाँ आइफोनको भविष्य ? चीनमा के होला नयाँ आइफोनको भविष्य ? – News Mansarovar
अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध चलिरहेको र अमेरिकाले चिनिया स्मार्टफोन कम्पनी हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा नयाँ आइफोनको चिनिया बजारमा भविष्य के होला ?
अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध चलिरहेको र अमेरिकाले चिनिया स्मार्टफोन कम्पनी हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा नयाँ आइफोनको चिनिया बजारमा भविष्य के होला ? भन्ने चासोको विषय बन्नु स्वभाविकै हो ।एप्पलले सार्वजनिक गरेका ४ नयाँ आइफोनका विषयमा चिनिया प्रयोगकर्ताहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । एप्पलका कतिपय चिनियाँ फ्यानहरु नयाँ आइफोनको आगमनमा खुसी मनाउँदै चिनियाँ बजारमा उपलब्ध हुने दिनको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । तर चीनमा उल्लेख्य संख्याका स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरु चाहिँ एप्पलको स्थानीय प्रतिद्वन्दी हुवावे कम्पनीले ल्याउने आसन्न स्मार्टफोनको पर्खाइमा छन् ।